लेखनका लागि सबभन्दा पहिले कुनै विषयले छुनुपर्छ। त्यसपछि विषयमाथि दुई–तीन दिन रन्थनिन्छु। लेखनको विषय कसरी समाउने, कस्तो शैली बनाउने, त्यसमै अभ्यास गर्छु। एउटा विषयमा धेरै शैली बन्न सक्छन्। आफंैलाई मन परेको शैलीबाट लेख्न सुरु गर्छु।
पात्रहरूले बोलेका अन्तरसंवादलाई म राम्ररी सुन्छु। पात्रले वाक्यमा बोलेको लयात्मकतालाई समाउँछु। पात्रले त अनन्त बोल्छ, बोलेको वाक्यमध्ये मन छुने लिन्छु।
'लक्षी र धौले कान्छा सधैंजसो बाझिरहन्थे। 'मार्दिन्छु त्यो मूर्दारलाई'– झगडा क्रममा धौले कान्छाले भनेको त्यही शब्दले मलाई छोयो। यसैबाट प्रभावित भएर 'दमिनी भीर' लेखेको हुँ।'
मानिसले समाजमा दिनहुँ भोगिरहेका विषय नै हुन् मेरा लेख्ने विषय। मानौं लोग्नेस्वास्नी झगडा गर्दैछन्। ती दुईले कुनै विषय उठाएर झगडा गरेका हुन्छन्। त्यसमध्ये कुन कुराले समाजलाई फाइदा पुग्छ, त्यही विषयलाई फराकिलो बनाउन घोत्लिन्छु। समाजलाई फाइदा पुग्ने विषय छान्छु। मैले प्रायः सीमान्तकृत, उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदाय, लैंगिक क्षेत्रका क्रियाकलापमाथि ध्यान दिइरहेको हुन्छु। उनीहरूबीचको घटनाक्रमले मलाई चाँडो छुन्छ।
लेख्नलाई समय तालिका बनाउने बानी छैन। साथीभाइसँग भेटिन्छ। कुनै बेला जाँडपानी खाइन्छ। एक दिन खाएपछि तीन चार दिन असर पुग्छ। ह्याङमा भने म लेख्नै सक्दिन। एकदमै फ्रेस मुडमा लेख्न बस्छु।
लेख्ने बेला एक सहयोगी पनि चाहिन्छ। चुरोट निभेमा आगो ल्याइदिनुपर्छ। सकियो भने अर्को प्याकेट ल्याउन पसल जाने सहयोगी चाहिन्छ। लेख्ने बेला मेरो छेउ कोही बोल्न पाउँदैनन्। चुरोट नखाई लेख्न सक्दिन। चुरोट, लाइटर, खैनी र पानी छेउमा हुन्छन्। त्यति भयो भने अर्को मान्छे चाहिँदैन। टेलिभिजन, मोबाइल सबै बन्द हुन्छन्। छेउछाउ कोही आउन पाउँदैनन्। लेख्न थालेपछि बिहानको खाना खाँदिन। दिनमा १० घन्टा लगातार लेखेको छु।
पहिले कविता हातले उतार्थें। पछि मैले दुई वटा कृति कम्प्युटरमै लेखें। 'हेत्छाकुप्पा' र 'दमिनी भीर' ल्यापटपमै लेखेको थिएँ। हातले लेख्दा मन नपरेको गोलो लगाइन्छ। कम्प्युटरमा डिलिट गरिन्छ। हातैले लेखेको फाइदा हुँदो रहेछ। लेख्ने बेला मन नपरेको शब्द पछि मन पर्न सक्छ। त्यसलाई सुधार पनि गर्न सकिन्छ। कम्प्युटरमा डिलिट गरेको कुन शब्द हो पत्तै हुँदैन। एकपटक तीन हजार पाँच सय शब्द लेखेर मन नपरेकाले डिलिट गरेको छु। मलाई चित्त नबुझे तुरुन्त फालिदिने बानी छ।
कतिपय घटनाक्रम धेरैले गलत भनिराखेको विषय पनि मेरा लागि सही विषय हुनसक्छ। यो गलतै हो त? आफैं प्रश्न गर्छु। मैले उसलाई धेरै सही देखेको हुन्छु। त्यसलाई सही बनाउन पनि लेखिएको हुन्छ। तर, त्यो बेला नियोजित ढंगले लेखिन्छ। कहिले आममानिसका लागि लेखिन्छ।
अमेरिकामा बस्ने र नेपालमा बस्ने दुवै मान्छे हुन्। त्यहाँ बस्नेको मनोविज्ञान, भाषा, संस्कृति, पहिचान फरक छ। यस्ता कुराबाट म उत्तेजित हुन्छ। साहित्यकारका बीचमा कहिलेकाहीँ म फरक पनि हुन्छु।
'दमिनी भीर' धेरै वाक्य लेखेपछि आएको शब्द हो। यो उपन्यास लेख्न मलाई एउटै वाक्यले छोएको थियो। त्यसको लागि चार महिना रन्थनिएँ। 'दमिनी भीर' को शैलीको लागि लक्षी र धौले कान्छा पात्र सधैंजसो बाझिरहन्थे। त्यही झगडाको बेला धौले कान्छाले 'मार्दिन्छु त्यो मूर्दारलाई' भन्यो। त्यो शब्दले मलाई छोयो। त्यही वाक्यबाट प्रभावित भएर उपन्यास लेखेको थिएँ।
लेखेपछि एकैपटक सक्ने बानी छैन। लेख्ने क्रममा नयाँ पात्र थपिन सक्छ। फेरि त्यो पात्र समाजमा छ कि छैन म खोज्न हिँड्छु। समाजमा भएका वास्तविक पात्रलाई लेख्छु। उनीहरूसँग खेल्ने, खाने, उठबस गर्ने गर्छु। पात्रका मनका कुरा भन्न लगाउन 'दमिनी भीर'मा रक्सी खुवाएको छु। उनीहरूका कथा लेख्न अगाडि नै जानकारी दिन्छु। नाम परिवर्तन गरेर लेख्छु भनेर अनुमति लिन्छु।
प्रस्तुति : भाषा शर्मा
योगी मत्स्येन्द्रनाथ शिवजीको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शिवजीबाट योग सिक्नुभएको हो। उहाँ प्रायः अर्द्धमत्स्येन्द्रासनमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यो आसनको आविष्कारकको रूपमा उहाँलाई लिने गरेको पाइन्छ। यद्यपि काठमाडौं सहरमा मत्स्येन्द्रनाथलाई रथमा राखी जात्रा...
वृद्धका शारीरिक–मानसिक अवस्था, तिनका वेदना र चाहना सन्तानले त्यही उमेरमा नपुगी बुझ्दैनन्। उनीहरू जब त्यस उमेरमा पुग्छन्, अनिमात्रै आमा–बाबुको पीडा बोध गर्छन्। चाहना बुझेपछि मात्रै उनीहरूको सेवा कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारे...
केही वर्षअघि पोखरेली लेखक र कलाकार साहित्य, कला वा संगीतको प्रतिष्ठान पोखरामा ल्याउन भन्दै आन्दोलनमा थिए। देशमा गणतन्त्र आयो तर पोखरामा त्यस्तो कुनै प्रतिष्ठान आएन। शासनको शक्ति काठमाडौं खाल्डोबाट स्थानीय स्तरमा...
एसियाकै ठूलो गुफा
निस्पट्ट अँध्यारो। गाइड भिमबहादुर थापाले एक मिनेट आँखा बन्द गर्नुस् भन्नु भयो। हामीले टर्चलाइट निभायौं। र, आँखा चिम्म गर्यौं।। कस्तो शान्त वातावरण! नौलो अनुभूति सँगाले मैले।
'बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिन्न ।' यात्राक्रममा यो सन्देश जोकोहीले पढेको, देखेको र सुनेको हुनुपर्छ। सामान्य अर्थले यो सन्देश सवारी साधनको गतिसँग जोडिएको छ । तर, गम्भीर...